Ingabe Ukuvuvukala EBongo Kungaba yisibonakaliso se-Fibromyalgia?
I-Fibromyalgia ingadala ukwanda kokuvuvukala ebuchosheni
30 / 06 / 2019 /Amazwana we-0/i fibromyalgia/av olimalayo
Manje, isixhumanisi sitholakele phakathi kokunye ukusabela kokuvuvukala okufika ebuchosheni naku-fibromyalgia
I-Fibromyalgia yisifo esibuhlungu esibuhlungu esibuhlungu esibuhlungu esijutshwe abaningi, kepha esingagxili ocwaningweni nasekwelashweni. Ukuxilongwa ngempilo kubangela ubuhlungu ezingxenyeni ezinkulu zomzimba (ezivame ukuhamba), izinkinga zokulala, ukukhathala okuphikelelayo nokuqonda ubuchopho inkungu (ngokwengxenye ngenxa yokuntuleka kokulala).
Sekuyisikhathi eside kusolwa ukuthi ukuvuvukala ne-fibromyalgia kunokuxhumana okuthile. Kepha ungalokothi ukwazi ukufakazela ukuxhumana okuqondile. Manje, abaphenyi baseSweden eKarolinska Institute ngokubambisana nososayensi baseMelika esibhedlela saseMassachusetts General Hospital benze ucwaningo olunzulu olungaholela endleleni endaweni eyayingaziwa ngaphambili nge-fibromyalgia. Lokhu okutholakele selokhu kwasekelwa futhi esinye isifundo kumagazini Ubuchopho, Ukuziphatha kanye nokungavikeleki.
Izeluleko Zempilo Engcono yamathumbu:
Amalungu ethu angaphezu kwe-18500 eqembu "I-Rheumatism and Chronic Pain" abika imiphumela yokulwa nokuvuvukala kokudla okuthile kwemvelo. Ucwaningo lwakamuva lukhombisa nokuxhumana okucacile phakathi kwesisu nobuchopho, yingakho sincoma izengezo zemvelo zempilo engcono yamathumbu. Zama isibonelelo nge probiotics (ama-gut bacteria amahle) noma Isisu Sesisu. Kwabaningi, kungaba nomphumela omuhle, futhi siyazi nokuthi impilo yamathumbu ibaluleke kakhulu ekutheni uzizwa kanjani ngenye indlela - zombili ngamandla, kepha futhi nomoya.
I-Fibromyalgia kanye nokuvuvukala
I-Fibromyalgia ichazwa njenge-rheumatic soft rheumatism. Lokhu kusho ukuthi, phakathi kwezinye izinto, ukuthi ubona ukusabela okungavamile kwezicubu ezithambile - njengemisipha nezicubu ezinemicu. Lezi zivame ukuba ne-hypersensitive kumuntu one-fibromyalgia - okuholela ekwandeni kwamasiginali ezinzwa nokubika ngokweqile ebuchosheni. Okusho ukuthi ukungakhululeki okuncane kungaholela ebuhlungwini obukhulu.
Akumangalisi ukuthi abacwaningi bakholelwe ukuthi lokhu kungahle futhi kuholele ekumeni okwenzeka njalo kokuvuvukala kulabo abane-fibromyalgia.
Isifundo: Ukulinganiswa Kweprotein Ethile
Abaphenyi baqale ngokwenza imephu yezimpawu kulabo abane-fibromyalgia - bese kuba iqembu lokulawula. Ngemuva kwalokho kuba yinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Ngeke singene imininingwane emincane kakhulu, kodwa kunalokho sihlose ukukunikeza ukubuka konke okuqondakalayo.
Ngemuva kwalokho babhala ukwanda kokuvuvukala kwe-neural ebuchosheni nakumgogodla womgogodla - futhi ikakhulukazi ngesimo sokusebenza ngokweqile okucacile kumaseli we-glial. Lawa ngamaseli atholakala ngaphakathi kwesistimu yezinzwa, azungeze ama-neurons, futhi anemisebenzi emibili eyinhloko:
Ukwakha okunempilo (kufaka phakathi i-myelin ezungeze imicu yezinzwa)
Yehlisa ukusabela kokuvuvukala bese ususa imfucuza
Lokhu kwenziwa kwemephu kwenziwa, phakathi kokunye, ngokusebenzisa i-imaging diagnostics, ekala umsebenzi weproteyini elithile elibizwa nge-TSPO. Iprotheni etholakala ngamanani amakhulu kakhulu uma unamaseli e-glial ngokweqile.
Ucwaningo lubhale umehluko ocacile phakathi kwalabo abathintekayo yi-fibromyalgia kuqhathaniswa neqembu elilawulayo - okusinikeza ithemba lokuthi lokhu kungavula indlela yokuthi lokhu kutholakala ekugcineni kuthathwe ngokungathi sína.
Kungase kuholele ekwelashweni okusha
Inkinga enkulu nge-fibromyalgia ukuthi awuyazi imbangela yenkinga - ngakho-ke awazi ukuthi kufanele uphathe ini. Lolu cwaningo ekugcineni lungasiza ngalokho - futhi lunikeza abanye abacwaningi amathuba amaningi maqondana nokucwaninga okunenjongo kakhudlwana kulolu lwazi olusha.
Ngokwami, sicabanga ukuthi kungaholela ophenyweni nasekuhlosweni okuqondiswe kakhulu, kepha asiqinisekile ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani. Ngemuva kwakho konke, sazi ukuthi i-fibromyalgia ayikaze ibe yindawo enikezwe ukugxila okuningi uma kuziwa ekuvimbeleni nasekwelashweni.
Okutholakele kuchaza Izimpawu Zokuqonda
I-Fibromyalgia ingaholela ekhanda hhayi ngaso sonke isikhathi ibandakanyeke ngokuphelele - le nkungu siyibiza ngokuthi yi-fibro fog. Lokhu kungenxa yezizathu eziningi ezahlukahlukene - kubandakanya ukungalali kahle ngenxa yokwanda kobuhlungu nokungazinzi emzimbeni, kanye nalokho ebesikusola isikhathi eside - okungukuthi umzimba kumele ulwe njalo ukunciphisa izimo zokuvuvukala emzimbeni. Futhi kuyakhathaza kakhulu ngokuhamba kwesikhathi.
Ezigabeni ezimbili ezilandelayo, sizokhuluma kabanzi ngokuthi ukuzivocavoca okwenziwe ngokwezifiso nokudla okubangelwa ukuvuvukala (ekudleni kwe-fibromyalgia) kungakusiza kanjani ekutholeni kabusha ukulawula kwakho kwe-fibromyalgia yakho.
I-Fibromyalgia, Ukuvuvukala Nokuzivocavoca Umzimba
Ukuzivocavoca umzimba njalo nge-fibromyalgia kunzima kakhulu. Ungacabanga nje ukuthi umcabango wokuzivocavoca uma umzimba wonke ubuhlungu. Noma kunjalo, kubaluleke kakhulu ukuthi ungayeki ngokuphelele futhi ugxile kokuzivocavoca okuguquliwe - kungaba ukuqeqeshwa kokuhamba, ukuhamba ehlathini noma ukuvivinya umzimba ngobumnene njengoba kukhonjisiwe ngezansi. Ukugcina ukunyakaza kunikela emzimbeni osebenza kangcono ngokujikeleza kwegazi okuthuthukile - nakho okungakusiza ukugcina ukuvuvukala kubheke, njengoba nakho kungaba nomphumela wokulwa nokuvuvukala.
Kwividiyo engezansi ungabona uhlelo lokuqeqesha labo abane-rheumatic fiber rheumatic fibromyalgia eyenziwe ngu chiropractor Alexander Andorff. Lolu wuhlelo olungakusiza uqinise imisipha ebalulekile esemuva nengaphakathi - engaba nomsebenzi ongcono nokujikeleza kwegazi.
I-Fibromyalgia kanye ne-Anti-inflammatory Diet
Manje njengoba usuyazi ukuthi ukwanda kokuvuvukala okwandayo kudlala indima ku-fibromyalgia, kubalulekile ukuthi ugxile ekudleni okucindezela ukuvuvukala emzimbeni. Ku-athikili engezansi ungafunda kabanzi ngokuthi izinhlobo ezithile zokudla zibangela kanjani ukuvuvukala okwengeziwe emzimbeni (ukuvuvukala) nokuthi abanye banciphisa kanjani ukuvuvukala (anti-inflammatory). Kunconywe ukufundwa kwanoma ngubani one-fibromyalgia.
Ukwazi ukuthi i-fibromyalgia kuholela ku-hypersensitivity (amasignali akhulayo wezinhlungu) nokuphendula kokuvuvukala, futhi uyaqaphela ukuthi leli yiqembu lesiguli elidinga ukwelashwa okuningi kunabanye. Leli qembu lesiguli ngakho-ke livame ukusetshenziswa kakhulu kwamaphilisi ezinhlungu - nezindlela zokwelashwa ezivamile ezifana ne-musculoskeletal laser therapy, ukubhucungwa nokuhlanganiswa ngokuhlanganyela - ngokwesibonelo ne-physiotherapist noma i-chiropractor.
Iziguli eziningi zisebenzisa nokuzithiba nokuzithiba ezicabanga ukuthi zizisebenzela ngokwazo. Isibonelo, ukucindezela kuxhasa futhi kubangela amabhola wamaphuzu, kepha futhi kunezinye izindlela eziningi nezinketho.
Ukuzisiza Okunconyiwe Kwezinhlungu Ze-Rheumatic and Chronic
Sikucela ngomusa ukuthi wabelane ngale ndatshana kwezokuxhumana noma ngebhulogi lakho (sicela uxhumanise ngqo ne-athikili). Siphinde sishintshanise izixhumanisi namawebhusayithi afanele (xhumana nathi ku-Facebook uma ufuna ukushintshanisa ngesixhumanisi newebhusayithi yakho). Ukuqonda, ulwazi olujwayelekile kanye nokugxila okwandisiwe yizinyathelo zokuqala ezibheke empilweni engcono yansuku zonke kulabo abanezifo ezingapheli zokuxilongwa.
Umthombo: Ukusebenza kwe-Brain glial ku-fibromyalgia - Uphenyo lwamasayithi amaningi we-positron emission tomography. 2019.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/betennelse-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 olimalayo https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 olimalayo2019-06-30 09:51:522021-03-24 10:55:42I-Fibromyalgia ingadala ukwanda kokuvuvukala ebuchosheni
Okufanele Ukwazi Nge-Polymyalgia Rheumatism Lokhu kwehluka esiswini kungaba yimbangela ye-fibromyalgia